Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ dị iche iche » Nke a ọ bụ ụzọ a ga-esi kwụsị ọrịa na-efe efe n’elu ụwa?
Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
A na-ekenye ndị otu ASEAN nke nzuko omeiwu ọhụrụ "Roadmap to End Pandemics" ma kpọọ "Nature Protection naanị ọgwụ mgbochi na-adịte aka," na-ekwu na ụzọ iji gbaa ọgwụ ụwa bụ site na "Otu Ahụike."
Fọdụ ndị omeiwu na gọọmentị nke mba ndị otu ASEAN na-etinye aka na Usoro Ahụike Otu iji gbochie ọrịa na-efe efe n'ọdịnihu.
Mgbochi na-efu pasent 0.2 nke mgbake ọrịa kwa afọ na nkwado ma bụrụ nke a ga-etinye n'ime mmemme "Mee Ka Ọ Dị Mma".
Otu "Roadmap" nke ndi otu 80+ kpughere, na-eduzi ndi ochichi, ulo oru, obodo, na ndi mmadu otu esi eme ka ihe di elu banyere oria ojoo.
Njikọ aka nke ndị ọrụ nchekwa, ọrụ ugbo, ahụike, nchekwa, ego, na nkwukọrịta, EndPandemics, wepụtara ụzọ iji jikọọ ọrịa na-efe efe n'ọdịnihu na nnọkọ pụrụ iche nke ndị otu Association nke Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia (ASEAN) na mba ndị na-ekiri ihe.
N’agbata ọnụọgụ ọhụrụ nke ụdị dị iche iche nke nje SARS-CoV-2, ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) emeela nyocha na ịkwalite atụmatụ dị mma iji gbochie ọrịa na-efe efe ma kwenye ịtụle otu usoro Ahụike. Otu “Webinar Executive Webinar on Preventing Pandemics” bụ ndị AIPA haziri ya na onye ya na ya bụ MOU, Freeland na EndPandemics alliance.
Otu Health agwakọtara usoro nke na-ekwu maka ahụike mmadụ n'otu oge, ahụike anụmanụ (gụnyere anụ ụlọ na anụ ọhịa), yana ahụike okike iji belata ihe egwu nke ntiwapụ nke nje na isi mmalite ha. Otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ọrịa niile na-efe efe (gụnyere HIV, Ebola, SARS, MERS, na COVID-19) sitere na anụmanụ.
Ndị omebe iwu na ndị isi ndị ọzọ sitere na Brunei, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Philippines, na Vietnam, yana Canada, European Parliament, New Zealand, na Republic of Korea, bụ ndị izizi nyochara ma tụlee “Roadmap to End Ọrịa Na-arịa Ọrịa: Iwulite ya Ọnụ, ”nke na-egosipụta ụkpụrụ ọhụrụ maka ihe mgbochi ọrịa na-efe efe.
Roadmap na-enye usoro mmeghe maka mmekorita nke gọọmentị, azụmaahịa, obodo, ọha mmadụ, na ndị mmadụ n'otu n'otu na isi ogidi anọ nke mgbochi ọrịa: (4) belata mkpa maka anụ ọhịa, (1) na-ere ahịa azụmahịa na anụ ọhịa, ( 2) chebe ma weghachite ebe obibi nke okike, na (3) mee ka ugbo na sistemu nri anyi di nma ma di nma.